सुन्दरताले आत्मविश्वास बढ्छ - कभर गर्ल - नारी
सुन्दरताले आत्मविश्वास बढ्छ
तपाईंका लागि सुन्दरता के हो ?
मेरो सुन्दरता भन्नु नै मेरो आत्मविश्वास हो । मेरो आत्मविश्वास बढ्न म पहिरन, मेकअप र लुक्समा आकर्षक देखिनुपर्छ ।
आफू कत्तिको सुन्दर छु जस्तो लाग्छ ?
सुन्दरता भनेको अरूको आँखामा भर पर्ने कुरा हो । म आफूलाई माया गर्ने व्यक्ति परें त्यसैले मलाई आफू राम्री लाग्छ । आफू राम्रो त जगत् राम्रो भन्ने सोच छ ममा ।
लामो समय डिस्टर्भ भएर पुन: त्यही सुन्दरतालाई कसरी कायम गर्नुभयो ?
दादाले छोडेर गएपछि मेरो अनुहारभरि स्क्राच, डार्क सर्कल, आँखा गाडिएको र हेर्दा नै बिरामीजस्तै थियो । कन्फिडेन्ट लेबल शून्य थियो । केही गर्ने आँट थिएन । डिप्रेसनको सिकार भएँ, धेरै मोटाएकी थिएँ । सबैले यसरी हुन्न भनेर हौसला दिन थालेपछि मैले डा. जेविना लामाको स्किन क्लिनिकमा बिग्रिएको स्किनको ट्रिटमेन्ट गराएँ । १ वर्षभित्र २२ किलो घटाएँ । साढे ३ वर्षको ट्रिटमेन्ट र मेहनतपछि मैले पुन: यो रूप–रंग पाएकी हुँ ।
तपाईंले त्यहाँ के–के ट्रिटमेन्ट गराउनुभयो ?
मेडिपिल, भ्याम्पायर फेसियल, आइबल ट्रिटमेन्ट र डार्क सर्कलको ट्रिटमेन्ट गराएकी हुँ । त्यसले मेरो सुन्दरतामा निखार आयो ।
सुन्दरता निखार्न अझ के–के गर्ने प्लान छ ?
अनुहारमा धेरै कोठीहरू छन् । त्यसको सर्जरी गरेर हटाउने प्लानमा छु । पिनासले नाक पनि अलिकता बाङ्गो छ । त्यसैले नाकको सर्जरी पनि गराउँदैछु । डार्क सर्कल र चाउरीपनका लागि बोटक्सको प्लान पनि छ ।
सफलताका लागि सुन्दरताको भूमिका हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
महिला सुन्दरताका भोका हुन्छन् । म मात्र होइन सबै महिलाले मेन्टेन गर्नुपर्छ ।
हिजोआज अनुहार बढी खुसी देखिन्छ नि ?
आजको दिन नै अन्तिम हो भनेर बाँच्न थालेकी छु । त्यसैले पहिलेको तुलनामा खुसी देखिएको होला ।
पहिरन तथा एसेसरिज : उमा नेमकुल, काव्य बुटिक, पाटनढोका
मेकअप तथा हेयर स्टाइल : ज्योति लिम्बू, ल्यासेस मेकअप स्टुडियो, लाजिम्पाट
लोकेसन : एलिस रिसेप्सन, गैरीधारा
मंसिर २०, २०७६ - शरीरका यी अङ्गको एक्सफोलिएट